Indawo yokukhempisa ikharavani ebekwe kulwandle oluhle lwaseTaean apho ukutshona kwelanga kuhle (Airst) Room - I-Airbnb
Indawo yokukhempisa ikharavani ebekwe kulwandle oluhle lwaseTaean apho ukutshona kwelanga kuhle (Airst) Room
Sowon-myeon, Taean-gun, South Chungcheong Province, South Korea
Ikharaveni sinombuki zindwendwe onguOnda
UOnda unezimvo eziyi-80 zezinye iindawo.
[Intshayelelo yeNdawo yokuHlala]
ㅁ Iflethi yolwandle isasazwe phambi kwebala lenkampu apho unokuchitha usuku kwindawo etofotofo e-Taean, apho ukutshona kwelanga kukuhle, ukuze ube namava eflethi yolwandle kwaye ushiye iinkumbulo ezikhethekileyo.
ㅁ Njengendawo yokuphumla phakathi kwendalo entle, ithetha intliziyo kamama.
Le yindawo yokukhempisha eyongeza uvuyo neenkumbulo kuchulumanco lokuhamba uhambo, kwaye sinethemba lokuba ungabuya unemvakalelo yothando xa uhamba.
Uhlobo lwegumbi elinye (igumbi lokulala eli-1 + ikhitshi eli-1 + igumbi lokuhlambela eli-1)
Indawo yokupaka iyafumaneka.
[Isikhokelo sokusetyenziswa kweBarbecue]
- Izinto ezibonelelweyo: amalahle, igrill, itafile yokukhempisha, isitulo sokuphumla
- Umrhumo: i-20,000 iphumelele kwikharavani nganye yabantu aba-4, i-25,000 iphumelele abantu abayi-5 okanye ngaphezulu / i-10,000 iphumelele ibhokisi ye-10 kg yeenkuni
-Ivaliwe ngenxa yeCorona.
- Nceda wenze ugcino emva kokuqinisekisa ukufumaneka kwazo zonke izibonelelo kunye neenkonzo zehotele, ezifana ne-barbecue, i-swimming pool, kunye ne-spa. Ngenxa yemeko ye-corona, kuhlala kungenzeki ukusebenzisa iindawo zoluntu kunye nezixhobo ebezikho ngaphambili. Ukuba wenza ugcino ngaphandle kokuqinisekisa, into yokuba awukwazi ukuyisebenzisa ngosuku lokuhlala kwakho ayiyi kuba sisizathu sokubuyiselwa imali.
Umbuki zindwendwe ngu- Onda
Iinkcukacha zethu zoqhakamshelwano ziza kuthunyelwa kwifowuni yakho emva kokuqinisekisa ukubhukisha.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sowon-myeon, Taean-gun